Iziqukathi Zokudla Kwama-White Kraft Paper Material Material
Amazwe amaningi akhiphe ukuvinjelwa opulasitiki. Ngaphansi kwalesi simo, sincome iziqukathi zethu zochungechunge lwamaphepha we-kraft ezimhlophe ezifakwe ngesivalo esiphakeme esisobala kumakhasimende amaningi, ezingakhombisa kangcono ukudla okusebhokisini.
Izikhunta zethu zokuphatha iziqukathi zokudla zivumelaniswa nokupakishwa kokudla okuhlukahlukene, njenge-sushi, i-bento, isaladi, isinkwa, njll.
Lo mkhiqizo wamukela izidingo zamakhasimende ezenziwe ngokwezifiso, ukuma, ukuphrinta nokupakisha.
Sidayise lezi ziqukathi e-Italy, Spain, Canada, Australia nakwamanye amazwe. Siyazikhathalela ngentengo enhle kakhulu enedizayini yokudala ukusiza amakhasimende ukuthi agcine izindleko futhi athole imajini enhle.
Ibhokisi Lephepha leBrown Kraft
Le Brown Kraft Paper Box Factory ikhethe izinto ezisezingeni eliphakeme, ukuthungwa kubucayi futhi kuthambile, kubushelelezi futhi kubushelelezi, kusebenza kahle, kumamaki amaningi. Ubuciko obuhle, ukwelashwa okuphelele kwekhoneni, okuhle futhi okuhlala isikhathi eside. Ukuthungwa okuhle kwenza ibhokisi lesipho lithunyelwe kakhudlwana.
Ibhokisi le-Sushi le-CHUNKAI linenzuzo enkulu njengoba ingezansi:
1.Good Sealling for isitoreji ephephile
2.Different Usayizi ozikhethele
3.Thicker futhi Hard Hard
4.Exquisite Design ngephethini enhle
5.Antifogging, kangcono isibonisi
Lukathayela Paper Fruit Box
Leli Bhokisi Lesithelo Lesikhwama Elimanziwe linezendlalelo ezintathu zephepha likathayela eliqinile, eliqinile futhi eliqinile. Lezi zivunguvungu zenzelwe ukwenza umkhiqizo ungathambeki kakhulu ekubolile. Ukuphrinta kwephethini enkulu, ngokuhambisana nesithombe semango, enhle futhi ephanayo, ithuthukisa inani lomkhiqizo. Isibambo sinengqondo ekwakhiweni, akulula ukusiqhekeza, futhi asilimazi isandla.Ibhokisi likhulu kakhulu futhi liqinile, izinto zokusetshenziswa zokudla okunezitifiketi ze-FSC, zinempilo futhi zinobungani bemvelo, ezingahlangabezana ne-FDA ejwayelekile, ephephile nokungcola -kukhululekile. Isakhiwo se-crease senza kube lula ukuvula nokuvala ngesikhathi sokuyisebenzisa.
Ibhokisi lePizza elimbala likaBrown eli-3
Ibhokisi lePizza eliphrintiwe lihle, iphethini iyakhanga, futhi akulula ukufiphala. Indawo enethezekile futhi ebushelelezi, ukuphrinta kungenziwa ngendlela oyifisayo, futhi ukwakheka komgodi wokufaka umoya kuqinisekisa ukuthi i-pizza ayonakalisi. Ibhokisi liqinile impela, izinto zokusetshenziswa ezibanga lokudla, zinempilo futhi zinobungani bemvelo, ezingahlangabezana ne-FDA ejwayelekile, ephephile futhi engenakho ukungcoliswa. Isakhiwo se-crease senza kube lula ukuvula nokuvala ngesikhathi sokuyisebenzisa.
Isitsha Sokudla Okubolayo
Ibhodlela Lepulasitiki Lokwakha I-Fiber Powder Bottle
Leli bhodlela lePlastic Hair Building Fiber Powder manje selidayisa kakhulu e-Asia. Singanikeza inani elincintisanayo kakhulu laleli bhodlela, ngoba sililahlile futhi sazithuthukisa ngokwethu. Ngakho-ke, uma ufuna ukuthenga ibhodlela le-Plastic Hair Building Fiber eshibhile, lena kuzoba ukukhetha kwakho okuhle.Sithengise leli bhodlela e-USA, Russian, EU nakwamanye amazwe.Sikhathalela intengo enhle ngomklamo wokudala ukusiza izindleko zokonga amakhasimende bese uthola imajini enhle.
500ml Matte Black Glass Futha Bottle
Leli bhodlela le-500ml Matte Black Glass Spray lihle kakhulu, lilungele zonke izinhlobo zetshezi.Lokhu Okungenalutho okugcwaliswa kabusha kweGlass Spray Amabhodlela we-4 Pack 16 oz for Essential Oil, Aromatherapy, Cleaning Products, Perfume, Alcohol Sterilizer, with 4 Free Sprayers, 4 Ofeleba .Iphakheji Faka phakathi-- 4 Iphakethe 16 oz Glass Spray Amabhodlela Amahhala Abalulekile Amafutha Plastic Uphaneli, 4 Bottle Caps nama-8 PC amalebe wokulinganisa omnyama Wokuxuba, Imikhiqizo Yokuhlanza Ezenziwe Ngayo. Ibhodlela le-Glass le-Spray le-16 elikhulu elinombhobho wokudonsa okulula ongasethelwa kwinkungu enhle noma ekusakazeni okuqinile.Singenza ngokwezifiso umbala webhodlela, futhi ilebula noma uprinte ilogo ebhodleleni noma cap.